> Resource> Video> Olee ịkụda A Song-enweghị Agbanwe Agbanwe Ẹtop
Na-emekarị, ndị mmadụ akwụsịlata a song otú ha nwere ike iji ya na-amụta ma ọ bụ na-akụziri otú e si na-abụ abụ ma ọ bụ na-egwu akwara. Mgbe ọzọ, ụfọdụ ndị jiri ya ala dị nnọọ ka fun mgbe ị na-Ịnọ nkịtị gwụrụ. Anyị nile na-Ịnọ nkịtị gwụrụ mgbe ụfọdụ. Agbanyeghị, ị maara otú akwụsịlata a song enweghị agbanwe agbanwe pitch? Na ị bụghị onye mbụ na-ajụ ajụjụ a. Ebe a bụ ụfọdụ yiri ndị si Yahoo Azịza:
Olee otú m nwere akwụsịlata a song enweghị agbanwe agbanwe pitch na kọmputa? Achọghị m ka m na-akwụ ụgwọ maka software. M na-agbalị Audacity, ma mgbe ọ bụla m mbubata a song, ọ bụ mgbanwe ya na ọ bụ naanị mkpọtụ.
Bụ n'ebe a na omume nke ga-ekwe ka ị kwụsịtụ a song (MP3) na-enweghị na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ igodo pitch? M mkpa akwụsịlata a song ka m wee na-akụziri a na-amụrụ otú na-egwu a ụfọdụ song na guitar.
Isiokwu a ga-akọwa otú akwụsịlata a song enweghị agbanwe agbanwe pitch na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Lee kwa akwụsịlata video na iMovie.
Nzọụkwụ 1: Tinye music faịlụ ka usoro ihe omume
Ị nwere ike ma pịa "Import" na isi window na họrọ music faịlụ site na kọmputa gị, ma ọ bụ nnọọ nanị ịdọrọ na dobe music faịlụ ka onye ọrụ Album. Iji mee ka songs ngwa ngwa, akpa Dọrọ na dobe ha ka ha na usoro iheomume na ala.
Nzọụkwụ 2: Otu click ịtọ music ọsọ
Ugbu a abụọ click na kwukwara music imeghe audio edezi panel. Ị ga-ahụ nhọrọ gụnyere Speed, Mpịakọta, ichabo na, ichabo na Ẹtop. Dị ka ị pụrụ ịhụ, e nwere 4 ntọala maka Speed ​​nhọrọ. Họrọ 0,5 ka ịkụda gị music na ọkara ọsọ. Adịghị ịgbanwe pitch. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe olu tinyere na ọsọ, i nwere ike mee uru ọ bụla nso si -12 ka 12.
0,5: ọkara nke mbụ ọsọ
1: The mbụ ọsọ
1.5: 1.5 ugboro nke mbụ ọsọ
2: Ugboro abụọ nke mbụ ọsọ
Ọ bụrụ na ọ bụ a music video, i kwesịrị pịa audio mmanya ka ịgbanwee si video edezi nhọrọ ka audio edezi nhọrọ mgbe abụọ na ịpị kwukwara music video. Mgbe ahụ ị pụrụ akwụsịlata a music video ke otu ụzọ na a song.
Nzọụkwụ 3: Export ngwa ngwa music
Mgbe ị gụsịrị ọsọ mwube nke a song, pịa "Mepụta" ma họrọ "Format". Site ndepụta, họrọ MP3 dị ka mmepụta usoro. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-agbanwe elu ntọala. N'ikpeazụ, pịa ọzọ "Mepụta" button mbupụ ihe MP3 faịlụ ka kpọmkwem nchekwa na kọmputa.
Atụmatụ: Ọ bụ fun idekọ gị onwe gị olu na voiceover atụmatụ na-agbanwe ọsọ na pitch na-a kpamkpam dị iche iche olu.
Olee otú iji tọghata Audio na MP4 / MKV si AC3 ka AAC